Wikipedia (Lalela /ˌwɪkɨpiːdiə/ nobe Listeni /ˌwɪkipiːdiə/ Wik-i-pee-dee-ə)ifinyeleleka mahala, kutholakala mahala ku-encyclopedia ekwi-inthanethi, isekelwa futhi isingathwa yi-Wikimedia Foundation. Cishe wonke umuntu okwazi ukufinyelela isayithi angahlela pheze yiziphi izihloko zayo. I-Wikipedia yiyona webhusayiti yesithupha ethandwa kakhulu futhi ethandwa kakhulu jikelele ngomsebenzi we-inthanethi BakaJehova. Njengoba ngo 2014, yayina-18 yamabhiliyoni wamaphepha abukwayo, futhi abukwa yizivakashi cishe eyizigidi ezingu-500 ngenyanga ngayinye.
Kufakaza obala Wikipidiya eziphakeme futhi kuye kwaholela abanye ukukhathazeka, njenge izinga lokubhala yayo, phansi kanye nokunemba imininingwane yayo. Nokho, nakuba ezinye izihloko zinemiBhalo engaqinisekisiwe noma ulwazi ayihlangani, a 2005 inhlolovo of Wikipedia eyanyatheliswa ngo Nature ngokusekelwe ngokuqhathanisa 42 wesayensi athikili nge Encyclopædia Britannica wathola ukuthi ezingeni Wikipedia sika zokunemba kwakusondela Encyclopædia Britannica kanye bobabili amazinga ezifanayo eliphansi 'amaphutha amabi ". Njengoba ka 2014, iwikipidiya yesiNgisi iqukethe cishe abayizigidi ezinhlanu izihloko, abangaphezu koyedwa kayikhulu Britannica sika 40,000. izinqubomgomo zeWikipidiya zihlanganisa ukuqinisekisa kanye nomzimba elikhulayo amazinga kubandakanya for izinga siqinisekiso.
6 Imithetho kanye nemithetho elawula nokuqukethwe kanye nomhleli nokuziphatha
7 Izinqubomgomo bokuqukethwe
8 Open ukubambisana
9 Arbitration Committee
12 Ulimi Amahumusho
13.1 Jimmy Wales and Larry Sanger
"Njengoba ihlaya athandwa uya, 'Inkinga ngeWikipidiya ukuthi nje usebenza ukuzijwayeza. Ngokwethiyori, singaphinde ukusebenza.'"
Ngokuzenzakalelayo, i uhlela ukuba isihloko ngokushesha iba etholakalayo. Ngenxa yalokho, bangase izihloko inezinto ezinganembile, biases ehlukile, futhi nombhalo elingenangqondo kodwa eliphimiselekayo shu kuze umhleli ilungisa nokushiyeka okunjalo. Lehlukene edishini, ngamunye ngaphansi ehlukile control tekuphatsa, bakhululekile ukushintsha le nqubomgomo. Ngokwesibonelo, i-Wikipedia German ucondza "izinguqulo ezinzile" lwezihloko, okuyinto Sekudlule izibuyekezo ezithile. Kulandela nezilingo eyayizothatha isikhathi eside nengxoxo nomphakathi, iwikipidiya yesiNgisi yethula uhlelo "lwezinguquko ozilindile" ngoZibandlela ka 2012. Ngaphansi kwalesi simiso, umsebenzi omusha ohloliwe abasebenzisi ezintsha awasho izihloko ezithile impikiswano noma ukucekelwa phansi kwempahla yizikhukhula kungaba 'ngokweyame abukeze kusukela Wikipedia esungulwe umhleli ngaphambi ncwadi ".
Nakuba izinguquko kungukuthi ehlelekile kubuyekezwe, isofthiwe ukuthi amandla Wikipedia inikeza amathuluzi athile sivumele noma ubani ukuba abukeze izinguquko kwabanye. Ilhasi elinalokhu "Umlando" wesihloko ngasinye ulandisa izibuyekezo. [Amanothi 1] Abahleli angayiqeda izinguquko, isibonelo ecaleni lapho kokuqukethwe ewusizo lasuswa. Abahleli Ungabuka izinguquko zewebhusayiti yakamuva, iziphi ukhonjiswe ukuhlelwa kwezenzakalo reverse. Qhaza avamile ngokuvamile silondoloza 'uhlu' lwezihloko ukuthi ukuwaheha ukuze zikwazi aziswe izinguquko esizayo. Ikhasi elisha kuyinqubo lapho izihloko abasanda wadala kuthiwa ihlolwe ukuze izinkinga ezisobala.
Izinhlelo zekhompyutha ziye zisetshenziswa kabanzi ukwenza imisebenzi elula futhi engamukelekile, ezifana sokulungisa nasekupeleteni ezivamile kanye nezindaba zezindlela namacebo okuloba, noma ukuqala izihloko ezifana nesifundo somhlaba okufakwe ifomathi evamile kusuka idatha ezibalo. Onesandla kwimpikiswano bakamalalahlengezela ukudala izihloko kanye bot wakhe kwabikwa ukudala kuze izihloko eziyizinkulungwane eziyishumi ezikuWikipidiya yesiSwideni ngezinsuku ezithile. Kukhona ezinye bots eyenzelwe axwayise ngokuzenzakalelayo abasebenzisi okwenza ovamile kwemaphutsa amaphutha (ezifana izingcaphuno angenakuqhathaniswa nobe obakaki olungenakuqhathaniswa), futhi avimbele ukudalwa izixhumanisi amawebhusayithi ethile. Bots nazo isicelo lokuvala enforcements okuyinto thola futhi buyisela izinguquko osolisayo abasebenzisi ezintsha, IPS okwabelwana noma IPS ibamba kuya amakhasi ihlushwa sockpuppets njengendlela ukuphinda kungenzeka of umsebenzisi ezivinjelwe kusetshenziswa ezinye izindlela amakheli IP. Abanye abasebenzisi kungaba lokubuyisa nanoma iyiphi ukuhlela yokuthi musa abonakale ngumsebenzisi zivinjelwe mbuzo. Esinye bot lichazwa ngokuthi i bot anti-ocekela phansi ukuthi izama ukuthola kanye nokubuyela phansi ngokushesha futhi ngokuzenzakalelayo. futhi Bots ungabika uku-editha ezivela akhawunti ethile noma ikheli IP zokhahlamba njengoba kwakwenziwa ngesikhathi the MH17 jet ukubeka phansi isigameko ngoJulayi 2014. Bots on Wikipedia kufanele yamukeleke ngaphambi kusebenze.
Ukucekela phansi impahlaEdit
Ngokwesibonelo, kwesinye isehlakalo esiphezulu, umhleli ongaziwa wethula isaziso esingamanga singene bibliyogilafu yezombusazwe UmMelika uJohn Seigenthaler, ngo-2005 Seigenthaler wamangalelwa ukwethulwa njengendlela yokusolwa ngokubulala uJohn F. Kennedy. Lesi sihloko sahlala singalungiswanga izinyanga ezine. USeigenthaler, umqondisi owasungula isihloko of seMelika (USA)namhlanje, kanye umsunguli Freedom Forum First Amendment Center ngaseNyuvesi yaseVanderbilt, ebizwa Wikipedia co-umsunguli Jimmy Wales futhi wabuza ukuthi ayenakho yini indlela yokwazi ukuthi obani nesandla the ukwaziswa okungelona iqiniso. UWales waphendula ngokuthi ayizange, nakuba isephulamthetho sagcina ngokuhlehlela emuva. Emva kwesigameko, uSeigenthaler echazwe yiWikipidiya ngokuthi "inamaphutha futhi imithwalo ithuluzi lokucwaninga". Lesi senzakalo zaholela izinguquko zenqubomgomo yeWikipidiya, ngokuqondile kubhekiswe ukuqiniswa kokuqinisekiswa kwezihloko umlandvomufi abantu abaphila.
Imithetho kanye nemithetho elawula nokuqukethwe kanye nomhleli nokuziphatha Edit
Okuqukethwe yiWikipidiya kuncike kwimithetho (ikakhulukazi, imithetho yobunikazi) yase United States kanye of the US isimo Virginia, lapho iningi Lamaseva WEWikipidiya lisuke likuphi. Ngaphezu kwezindaba zomthetho, izimiso sesihloko seWikipidiya kuthiwa esisekelwe 'wezinsika emihlanu ", kanye nezinqubomgomo eziningi neziqondiso enzelwe ukuba balolonge okuqukethwe ngokufanele. Ngisho le mithetho igcinwa ifomu wiki, futhi Wikipidiya abahleli njengendlela bhala emphakathini abuyekeze izinqubomgomo webhusayiti kanye nemihlahlandlela. Abahleli kungabaqhuba la imithetho ngokususa noma ukulungisa imithetho engasebenziyo. Ekuqaleni, nemithetho on ezinhlelweni okungezona zesiNgisi seWikipidiya zazisekelwe inguquko yemithetho yeWikipidiya yesiNgisi. Iye yehluke ngezinga elingakanani.
Ngokuvumelana nemithetho on the English Wikipedia, ngamunye entry e Wikipedia, ukuba afanelwe ukufakwa, kumele kube ngesihloko okusho encyclopedic futhi akuyona entry isichazamazwi noma isichazamazwi-like. A sihloko kufanele futhi bahlangabezane nezindinganiso Wikipedia sika of "notability", ngokuvamile kusho ukuthi kumelwe ukuba wathola Ukusabalala okuphawulekayo imithombo secondary efana media ezivamile- noma zamaphephabhuku ezinkulu yemfundo ezimele ngendaba ka ngesihloko. Ngaphezu kwalokho, Wikipedia uhlose idlulisele lwati kuphela ukuthi kakade osungulwe futhi wahlonishwa. It akumele ukwethula ulwazi olusha noma ucwaningo original. A bathi kungenzeka ukuba inselele kudinga kukhulunywa emthonjeni onokwethenjelwa. Phakathi Wikipedia abahleli, lokhu ngokuvamile wabekwa ngokuthi "Isiqinisekiso, hhayi ngeqiniso 'ukuveza umqondo wokuthi abafundi, hhayi encyclopedia, yibona ekugcineni abanomthwalo ekubhekeni yiqiniso komunci nokwenza nekuhumusha zabo siqu. Lokhu kungaholela ukususwa ukwaziswa isebenza, ngaleyo ndlela bulimaze ukufakwa kolwazi kanye nokukhula encyclopedia. Ekugcineni, Wikipedia akumele bathathe izinhlangothi. Bonke imibono kanye nemibono, uma ezibangelwa imithombo yangaphandle, kumele bajabulele i share elifanele Ukuhlanganisa kungakapheli isihloko. Lo waziwa ngokuthi indawo hlangothi of umbono (NPOV).
Uma ushintsho ngokuphindaphindiwe owabangelwa umhleli eyodwa abese ukuhlehliswa ngenye, i "Hlela war" ingase wagomela ukuba sebeqale. Wikipedia has izindlela eziningi izingxabano sokuxazulula. Ukuze athole umphakathi ukuvumelana wonkana, abahleli angamvusa izingqinamba at the Village Pump noma iqale isicelo Comment. Izinkundla akhethekile akhona for centralizing ingxoxo izinqumo ezithile, njengabaphostoli yini noma cha isihloko kufanele asuswe. (qhathanisa Notability in English Wikipedia.)
IKomiti Arbitration wengamela lokugcina ukuxazululwa indlela. Nakuba izingxabano ngokuvamile bavele kokungezwani imibono emibili ephikisayo kanjani izihloko okufanele ukufunda, iKomidi Arbitration ngokucacile enqaba ngqo abuse ngalo umbono okufanele yokutholwa. Zokuhlaziya imininingwane zisikisela ukuthi ikomidi engayinaki okuqukethwe ezingxabanweni futhi ligxile endleleni izimpikiswano kuqhutshwa kunalokho, esebenza cha kangaka ukuxazulula izingxabano futhi wenze ukuthula phakathi abahleli ezingqubuzanayo, kodwa ukuze Zikhipha abahleli eziyinkinga uma uvumela abahleli engase ikhiqize back e ukubamba iqhaza. Ngakho-ke, ikomidi asisho zilawule okuqukethwe lwezihloko, yize ngezinye izikhathi kube liyakulahla izinguquko kokuqukethwe uma ibona okuqukethwe entsha wephula izinqubomgomo Wikipedia (isibonelo, uma okuqukethwe entsha kubhekwa olubandlululayo). Amakhambi Its zihlanganisa nezixwayiso kanye probations (elisetshenziswa 63% of amacala) kanye nabahleli esivala kusuka ezihlokweni (43%), izindaba subject (23%) noma Wikipedia (16%). Complete nokuvinjelwa kusuka Wikipedia kuthiwa ikakhulu kuphela izimo of ukuzenza ongeyena nokuziphatha anti-social. Lapho ukuziphatha akuyona ukuzenza ongeyena nobe anti-kwezenhlalo, kodwana kunalokho anti-ukuvumelana nobe wephula izinqubomgomo ukuhlela, izixwayiso bavame ukuba ikhishwe.
Umphakathi Wikipedia sika uye wachazwa ngokuthi inkolo-like, nakuba ngaso sonke anezincazelo ngokuphelele negative. ukuthanda Iphrojekthi sika for cohesiveness, ngisho noma kudinga ukuhlehla ehlanganisa ukunganakwa of kokuqinisekisa, yaziwe njengoba 'anti-elitism ".
Wikipedia ayidingi ukuba abahleli balo kanye neqhaza ahlinzeke ukuhlonza. Njengoba Wikipedia ayekhula, "Ngubani uyabhala Wikipedia?" saba omunye imibuzo evame ukubuzwa on kuphrojekthi, ngokuvamile ngokubhekisela eminye imisebenzi Web 2.0 ezifana Digg [ukulandisa okudingekayo]. kanye Jimmy Wales wagomela ngokuthi "kuphela emphakathini ... iqembu elizinikezele ambalwa amavolontiya "kwenza ingxenye enkulu yomsebenzi iminikelo eya Wikipedia nokuthi ngalokho hlelo 'njenganoma iyiphi inhlangano wendabuko". Ngo-2008, a Slate umagazini esihlokweni wabika ukuthi: ". Abacwaningi e Palo Alto, 1 amaphesenti of abasebenzisi Wikipedia banesibopho cishe isigamu lezinhlelo isayithi sika" Le ndlela yokuhlaziya iminikelo kamuva phikisa ngu Aaron Swartz, ngubani yaphawula ukuthi izihloko eziningana yena banambitha kwadingeka izingxenye ezinkulu okuqukethwe kwabo (kukalwa inani abalingiswa) nesandla abasebenzisi nge low Hlela esikwenzayo kubalulekile.
Ucwaningo lwenziwa ngo 2012 Wikipedia kwadingeka abasebenzisi abakhuthele cishe 80.000. [hhayi ukulandisa inikezwe] [ukulandisa okudingekayo] Kuze kuya 60% of abasebenzisi Wikipedia ebhalisiwe ungalokothi wenze esinye edit emva kwamahora zabo zokuqala 24. [Lapho?] Izincazelo ezingabanga ukuthi abasebenzisi enjalo ukubhalisela nje injongo olulodwa, noma uyesaba away by nakho kwabo. Ngokusho Eric Goldman, abahleli abahluleka ukuhambisana Wikipedia imicikilisho zamasiko, ezifana inkulumo ukusayina amakhasi, ngokuphelele eyobonisa ukuthi kukhona Wikipedia abangaphandle, okwandisa amathuba okuthi Wikipedia wangaphakathi ngeke libhekise iminikelo yabo njengomuntu usongo. Abe ngaphakathi Wikipedia kuhilela izindleko non-eziwubala: the sandla kulindeleke ukwakha ikhasi yomsebenzisi, ufunde amakhodi zobuchwepheshe Wikipedia-eziqondene, bazithobe i Arcane ukuxazululwa inqubo, futhi sifunde "isiko Okumangaza ocebile nge e-emahlaya ngaphakathi ezibhekisela" . Non-ngemvume-in abasebenzisi kukhona kwezinye izakhamuzi ngomqondo lesibili class on Wikipedia, ngokuthi "abahlanganyeli basuke izitifiketi ngamalungu omphakathi wiki, abanezincwadi nesithakazelo ilungelo lokufuna ekulondolozeni ikhwalithi umkhiqizo msebenzi, ngesisekelo iqhaza kwabo eziqhubekayo ", kanti imilando umnikelo amakheli IP angeke ngempela nanoma yimuphi ngokuqiniseka kufanele zafundiswa noma sola phezu, umsebenzisi esithile.
A 2007 Ukutadisha by abacwaningi ezivela Dartmouth College wathola ukuthi "qhaza engaziwa futhi okuvamile kuya Wikipedia [...] injengoba esinokwethenjelwa umthombo wolwazi njengalabo nomthelela ngubani babhalise esizeni". A 2009 Ukutadisha by umhleli Business Insider nentatheli Henry Blodget wabonisa kutsi in isampula okungahleliwe athikili wokuqukethwe kunawo Wikipedia (kukalwa inani lombhalo nomthelela esindayo kuze edit yakamuva banambitha) is adalwe "kwabangaphandle" (abasebenzisi nge low edit okuzama), kanti kulungisa iningi futhi kwebinza lwenziwa "wangaphakathi" (iqembu khetha of abasebenzisi esungulwe). A 2008 Ukutadisha lwathola ukuthi Wikipedians ayemancane ovumelana, evulekile, futhi kanembeza kunabanye. A 2009 cwaningo wasikisela kwakukhona 'ubufakazi nokumelana ezikhula emphakathini Wikipedia kokuqukethwe entsha ". Ucwaningo oluthile lwathola ukuthi isizinda sandla kuya Wikipedia "kwaba kancane 13% abesifazane; yobudala isilinganiso esivivaneni kwaba maphakathi nawo-20s". A 2011 Ukutadisha by abacwaningi baseNyuvesi Minnesota lwathola ukuthi abesifazane sakhiwe 16.1% of. abahleli 38,497 owaqala ukuhlela Wikipedia-2009 Ngo isihloko January 2011 New York Times, Noam Cohen waphawula ukuthi 13% nje of nomthelela Wikipedia kukhona female ngokusho vo 2009 Wikimedia Foundation. Sue Gardner, owayekade umqondisi ophethe i Wikimedia Foundation, uthemba ukubona iminikelo zesifazane ukwandisa kuya amaphesenti amabili nanhlanu by 2015 Linda Basch, ongumongameli we-National Council for Research on Women, yaphawula umehluko kulezi Wikipedia umhleli izibalo kanye iphesenti labesifazane njengamanje acedzele degrees impohlo sika, degrees master kanye PhD nezinhlelo e-United States (bonke at amazinga amaphesenti 50 noma xaxa).
Abahleli in nokuma okuhle emphakathini ezohamba for omunye amazinga eziningi zokuzithandela buphathi: le iqala "nomqondisi", abasebenzisi anelungelo abangakwazi susa amakhasi, ukuvimbela izihloko ekubeni kwashintsha uma phansi nobe isihloko izingxabano , futhi bazame ukuvimbela abantu abathile evela kwemaphutsa. Naphezu igama, abaphathi kungukuthi okuthiwa ukujabulela yimuphi lungelo elikhethekile ngo ekuthathweni; kunalokho, amandla abo anesizotha kuphela ekwenzeni edits ukuba nemiphumela project-ububanzi futhi ngaleyo ndlela kuthiwa Ayivumeliwe kuya abahleli avamile, nokuqhamuka nemingcele ezihloselwe ukuvimbela abantu abathile evela ekwenzeni edits onakalisayo (efana phansi).
Kukhona Njengamanje 287 olimi kwizihumusho of Wikipedia (obizwa nangokuthi ngolimi izinguqulo, noma bamane udinga Ama-Wikipedia); ala, abayishumi nanye babe izihloko kwesigidi ngalinye (English, isiDashi, isiJalimane, isiFulentshi, isiNtaliyane, isiPolish, iSpanishi, Russian, isiSwidi, Vietnamese, no-Waray Waray), ezine ngaphezulu babe izihloko kuka 700,000 (isiCebuano, Chinese, isiJapane, isiPutukezi), 37 ngaphezulu babe izihloko kuka 100,000, kanti 73 ngaphezulu babe izihloko kuka 10,000. The kunawo, i English Wikipedia, has izihloko kuka million 4.5. Njengoba of June 2013, ngokusho Alexa, lo isizinda English (en.wikipedia.org; English Wikipedia) uthola cishe 56% of traffic Wikipedia sika ayesehle, ne uqhekeko ezisele phakathi kwezinye izilimi (iSpanishi: 9%; Japanese: 8%; Russian: 6%; German: 5%; French: 4%; Italian:. 3%) Njengoba of August 2014, izinhlelo zolimi kunayo eziyisithupha yilezi (ngokulandelana of esihlokweni count) the English, isiSwidi, Dutch, isiJalimane , isiFulentshi, futhi udinga Ama-Wikipedia zaseRussia. i nokuhlalisana kokuqukethwe ezindiminingi on Wikipedia ube khona ngenxa Unicode, ogama ukwesekwa yethulwa phakathi Wikipedia ngoJanuwari 2002 by Brion Vibber emva kwase efanayo yena lwenteke izinhlamvu of Esperanto.
Kusukela Wikipedia kusekelwe Web ngakhoke emhlabeni wonke, abanikela a edition olufanayo lulwimi ingasebenzisa zezigodi ezahlukene noma kungenzeka bavela emazweni ehlukene (njengoba kunjalo ngoba edition English). Lezi umehluko kungaholela abanye zingxabano phezu nesipelingi umehluko (isib color Versus color) noma ngamaphuzu umbono.
Jimmy Wales uye wachazwa Wikipedia ngokuthi "ukuze adale futhi ukusabalalisa a encyclopedia free of the esezingeni kwenzeke ukuba wonke umuntu ongashadile on planethi ngolimi lwabo siqu". Nakuba ngamunye imisebenzi edition ngolimi ucishe ngokuzimela, ezinye imizamo kwenziwa ukuze aqondise kuzo bonke. Basuke kweLuhlelo ngokwengxenye by Meta-Wiki, Wiki i Wikimedia Foundation enikelwe nokugcina zonke imiklamo yayo (Wikipedia nabanye). Ngokwesibonelo, Meta-Wiki inikeza izibalo ezibalulekile on zonke izibuyekezo ulimi Wikipedia, futhi it ucondza uhlu lwezihloko njalo Wikipedia kumele babe uhlu siphathelene kokuqukethwe eziyisisekelo by subject:. Biography, umlando, amazwe, umphakathi, isiko, isayensi, ezobuchwepheshe, kanye mathematics. Ngokuqondene nazo, akuyona ezingavamile for izihloko ezihlobene kakhulu olimini oluthile hhayi ukuba bangumfuziselo kwenye edition. Ngokwesibonelo, izihloko mayelana emadolobheni amancane e-United States bangase nje khona ngesiNgisi, ngisho nalapho behlangana notability criteria yezinye ngolimi Wikipedia imiklamo.
On 1 March 2014, The Economist esihlokweni esihloko sithi "Ikusasa Wikipedia" labala kuhlaziywa kwezimo ngokuqondene idatha enyatheliswa Wikimedia ngabachazela ukuthi: ". Inani wabahleli the lesiNgisi version uwile ngumuntu wesithathu eminyakeni eyisikhombisa". Izinga attrition for abahleli abakhuthele English Wikipedia kwaba ekhonjiwe by The Economist njengoba kakhulu Ngokungafani izibalo for Wikipedia kwezinye izilimi (non-English Wikipedia). The Economist libike ukuthi isibalo nomthelela nge-avareji ka emihlanu lezinhlelo ngaphezulu ngenyanga kwaba kuqhathaniswa njalo kusukela 2008 for Wikipedia kwezinye izilimi cishe 42,000 abahleli phakathi variances emincane zonyaka ka abahleli phansi noma phezulu mayelana 2,000. Amazinga attrition for abahleli e English Wikipedia, by kuqhathanisa ebukhali, ishiwo njengoba NEKUKHULUMA ngo 2007 at cishe 50,000 abahleli okuyinto usunciphe 30,000 abahleli njengoba of ukuqala 2014 Ngesikhathi ecashunwe mkhuba rate, inani abahleli abakhuthele English Wikipedia ilahlekelwe cishe 20,000 abahleli attrition kusukela 2007, kanti emafayeleni mkhuba rate kubonisa ukulahlekelwa yomunye abahleli 20,000 by 2021, wehlele 10,000 abahleli asebenzayo on English Wikipedia by 2021 Uma kwesokunxele zingancishiswa. Njengoba sazi ukuthi ukuhlaziywa mkhuba leyashicilelwa The Economist presents inani abahleli asebenzayo for Wikipedia kwezinye izilimi (non-English Wikipedia) njengoba osele kuqhathaniswa njalo futhi siphumelele ekusekeleni izinombolo zayo cishe 42,000 abahleli abakhuthele, umehluko uye bakhomba ukuphumelela Wikipedia kwezinye izilimi ukugcina esebenzayo yayo abahleli on nesisekelo nalesebentisa nokuqhubekayo. Akukho ukuphawula senziwa ngokuqondene yikuphi nezindinganiso umahluko edit inqubomgomo kusuka Wikipedia kwezinye izilimi (non-English Wikipedia) wayeyonikeza ohlukile kwenzeke ukuba English Wikipedia for ngempumelelo ameliorating eningi umhleli attrition rates on ulimi lwesiNgisi Wikipedia.
Jimmy Wales and Larry Sanger Edit
Wikipedia lase ngokomthetho umkhankaso on January 15, 2001, njengelungu edition-ngolimi lwesiNgisi single at www.wikipedia.com, futhi umemezele by Sanger on the Nupedia Uhlu lwamaposi ekhompyutha. inqubomgomo Wikipedia of 'phuzu-ka-umbono hlangothi "kwase eyabekwa ezinyangeni zayo zokuqala. Ngale kwalokho, kwakukhona imithetho emibalwa ekuqaleni Wikipedia lasebenza ngokuzimela of Nupedia. Ekuqaleni, Bomis wayehlose ukwenza Wikipedia ibhizinisi inzuzo.
Wikipedia yazuza qhaza zakuqala kusuka Nupedia, Slashdot ezithunyelwe, futhi search engine web indexing. Ngo-August 8, 2001, kwadingeka Wikipedia kuka 8,000 izihloko. On September 25, 2001, kwadingeka Wikipedia kuka 13,000 izihloko. Futhi ngasekupheleni 2001 sase esekhule izihloko cishe 20,000 no 18 olimi editions. Kwase 26 olimi asakazwa by sekwephuzile 2002, 46 ekupheleni 2003, futhi 161 ngu izinsuku okugcina 2004 Nupedia and Wikipedia Bahlala kwaze amaseva yangaphambili sika zathathwa phasi unomphela ngo-2003, futhi okulotshwe kuwo ezahlanganiswa Wikipedia. English Wikipedia wadlula uphawu lwezihloko million ezimbili on September 9, 2007, okusenza le encyclopedia kunazo zonke ezake babuthana, odlulele ngisho 1407 Yongle Encyclopedia, ezazikade aphethwe irekhodi iminyaka 600.
Ngo-November 2009, umcwaningi at the Rey Juan Carlos University e Madrid (Spain) lwathola ukuthi English Wikipedia wayengasenaso 49,000 abahleli phakathi nezinyanga ezintathu zokuqala of 2009; uma kuqhathaniswa, leli project walahlekelwa abahleli 4.900 nje kuphela phakathi nenkathi efanayo ngo-2008. The Wall Street Journal ekhonjiwe uhla imithetho zisetshenziswa kulungisa kanye nezimpikiswano ezihlobene kokuqukethwe okunjalo phakathi izizathu lokhu kuthambekela. Wales baphikisana la izimangalo ngo-2009, bephika ukuwa, singabaze indlela lesifundo. kweminyaka emibili kamuva, Wales wavuma ukuba khona nokwehla okuncane, siphawula ukwehla kusukela "kancane kuka 36,000 abalobi" ngoJuni 2010 kuya 35,800 in June 2011  in the interview efanayo, Wales aphinde athi inani abahleli sasithi "ezinzile futhi esimeme," a isimangalo okuyinto ephenywa mit sika Technology Review esihlokweni 2013 esihloko sithi "ekuncipheni Wikipedia." ngo July 2012, Atlantic libike ukuthi isibalo abaphathi nako ziyancipha. in the 25 November 2013 issue of kamagazini New York, uKatherine Ward sathi "Wikipedia, iwebhusayithi lesithupha-kunazo-kusetshenziswa, elibheke i yangaphakathi esibucayi. Ngo 2013, mit sika Technology Review yembula ukuthi kusukela ngo-2007, le site ilahlekelwe yesithathu abahleli ivolontiya ukuvuselela bese ulungise izigidi le encyclopedia inthanethi of amakhasi nalabo zisekhona abaye egxile ngokuya on minutiae."
Ngo-January 2007, Wikipedia wangena okokuqala uhlu top-eziyishumi amawebhusayithi athandwa kakhulu e-United States, ngokusho comScore Networks. With million 42,9 izivakashi eziyingqayizivele, Wikipedia yayibekwe ezingeni number 9, odlulele iNew York Times (# 10) no Apple (# 11). Lokhu kwasho okukhulu phezu January 2006, lapho ayedla kwaba isibalo 33, kanye Wikipedia ethola azungeze 18.3 million izivakashi eziyingqayizivele. Ngo February 2014, kwaba Wikipedia website lesithupha ethandwa kakhulu emhlabeni wonke ngokusho Alexa Internet, ekutholeni 12 billion zokubukwa kwamakhasi njalo ngenyanga (2.7 billion kusukela United States). On 9 February 2014, The New York Times yabika ukuthi Wikipedia has 18 billion zokubukwa kwamakhasi futhi cishe abayizigidi ezingu-500 izivakashi eziyingqayizivele ngenyanga, "ngokwezinto izilinganiso liqinile comScore."
Ngo-January 18, 2012, i-English Wikipedia iqhaza ochungechungeni imibhikisho Bafunisiswa ngokumelene imithetho emibili ehlongozwayo e-United States Congress-the Stop Online ukudunwa Act (uSopa) kanye uvikele Act IP (PIPA) -ngomusa blacking out amakhasi alo for 24 amahora. Ngaphezu 162 million abantu babebheka blackout Incazelo ikhasi esikhundleni saso Wikipedia nokuqukethwe okwesikhashana.
Mhla zingama-20 Masingana 2014, USubodh Varma abikela i "The Economic Times" wabonisa ukuthi hhayi nje kwadingeka Wikipedia ichaza isicaba kodwa "walahlekelwa ngamasenti ali-10 wewalo enamakhasi ukubukwa ngonyaka odlule ngamunye. Yilokho ukwehla ngo-2 billion phakathi kuka-Zibandlela ka 2012 noka 2013. izinguquko ezithandwa kakhulu abahola:. enamakhasi imibono iWikipidiya yesiNgisi yehle ngo-12 senti, labo of version German Ngafaka by 17 cent kanye version Japanese per balahlekelwa 9 angu "Varma wanezela ukuthi,"Njengoba abaphathi be-Wikipidiya bacabanga ukuthi lokhu kungaba ngenxa yamaphutha wokubala, abanye osolwazi babona ukuthi iphrojekhi yeGrafu Yolwazi Lweguguli Google's Knowledge Graphs project launched last year may be gobbling up Wikipedia users." When contacted on this matter, Clay Shirky, associate professor at NewYork University and fellow at Harvard's Berkman Center for internet and Security indicated that he suspected much of the page-view decline was due to Knowledge Graphs, stating, "If you can get your question answered from the search page, you don't need to click [any further]."
Retrieved from "https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia&oldid=93254"
Last edited on 25 uMandulo 2021, at 00:14
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-25 uMandulo 2021, nge-00:14.